Ogaden News Agency (ONA) – Weerar xalay lagu qaaday Xerada Kafladoorka Qabridahare oo saraakiil gudaha ku shireysay lagu laayay
Weerar xalay lagu qaaday Xerada Kafladoorka Qabridahare oo saraakiil gudaha ku shireysay lagu laayay
Thu. 07 March 2013 (ONA)-War goor dhawayd naga soo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya weerar iyo duqayn xoogan oo xalay saqadii dhexe lagu qaaday fadhiisimaha ay askarta gumaysiga Ethiopia ka daganyihiin magaalada Qabridahar ee xarunta Gobolka Qoraxay. Hawl galkaan oo ku bilowday madaafiic lagu garaacay xerada ciidamada gumaysiga Ethiopia ee kifladoorka ayaa in mudo ah markii ay socotay madaafiicdu waxay NH/CWXO gudaha ugaleen magaalada, waxaana dagaal ka dhacay gudaha magaalada lagu gubay gaadhi tikniko ah oo qori saarnaa kaasi oo ay Askarta gumaysiga Ethiopia si roonda ah magaalada ugu dhex mari jireen iyadoo halkaasi uu ku gubtay gaadhigii iyo Askartii saarnayd.
Dagaal isna ka qarxay afaafka hore ee Xerada Kifladoorka kadib markii madaafiic lagu asqaysiiyey ayaa waxaa usuurta gashay NH/CWXO inay gudaha ugalaan xerada iyagoo bartilmaameedkoodu ahaa saraakiil kuwa gumaysiga Ethiopia ah oo ku shiray teendho ay ka dhisteen xerada gudaheeda, waxaana halkaasi lagu laayey saraakiil dhawr ah oo aan dib kasoo sheegi doono magacyadooda.
04/03/2013 Farmdoow oo Shaygoosh katiran waxaa lagu dilay hal askari oo kuwa gumaysiga Ethiopia ah
04/03/2013 Dagaal xoogan oo ka dhacay Deegaanka lagu magacaabo Haar-madooyo oo Dhuxun udhow waxaa askarta gumaysiga Ethiopia 7 Askari waxaana lagaga dhaawacay 8 kale
01/03/2013 Dig oo Awaare katiran dagaal ka dhacay waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale,
01/03/2013 kaaraa-mardha oo Jigjiga katirsan waxaa lagu dilay 2 Askari waxaana lagu dhaawacay 2 kale
01/03/2013 Cadaadaale oo Daratoole udhow waxaa lagu dhaawacay hal askari oo kuwa gumaysiga Ethiopia ah
28/02/2013 karin-barkhadle oo Sagag udhow kamiin ay halkaasi ka xidheen NH/CWXO ayaa waxa ay halkaasi ku gubeen 1Baabuur iyo Askartii saarnayd oo aan waxba kabixin.
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo ka kala dhacya 01,02,03, iyo 04tii bishani March 2013 deegaanada kala ah Balli-guduud oo Isku-dhoonley udhow,War-gaadsan oo Gunagado ka tirsan,Farmadow oo Shaygoosh katirsan,Horakhaliifo iyo Hora-howd oo Qabribayax kawada tirsan,dagaaladaasi oo Askarta gumaysiga Ethiopia lagu soo gaadhsiiyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.